Mashruuc lagu barayo sida ay Iswedhen u shaqeyso dadka aan waxba qorin oo aqrin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Haween ka qayb-qaadanaya mashruuca "sweden in abox" oo ka socda magaalada Växjö. Sawirle: Warsame Elmi
Mashruuc lagu barayo sida ay Iswedhen u shaqeyso dadka aan waxba qorin oo aqrin
Markii ugu horeysay oo ay qalin qaataan
7:21 min 7:21 min
La daabacay fredag 23 november 2012 kl 13.40
Waxaa dalkaan Iswedhen soo badanaya dadyowga soogalootigaa ee aan waxna qorin oo aqrin, sida aan marmar badan idaacadaan ka tabineyba. Waxay dadkaan inta badan ka soo kala jeedaan dadalal tacliinta ka liita, sida Soomaliya iyo Afghanistan. Mashruuc loo bixyey Iswedhen in a box uuna wado ururka tacliinta ABF ayaa ka socda magaalada Växjö. Mashruucan oo ay ka qayb qaadanayaan labaatameeyo haween u badan ayaa ujeedka la leeyahay yahay in haweenkaan loo soo dhaweeyo suuqa shaqa iyo weliba in laga soo saaro farsamooyinka ugu haboon ee dadywoga noocaan ah bulshada looga mid dhigi karo. Marian Paine waa maamulaha mashrucaan.
- Mashruucaan Iswedhen in a box waxaa uu bilowney bishii mars sannadkaan gudahiisa, waxa uuna socon doonaa ilaa iyo bisha Juni sannadk 2014, ayey Marianne Paine maamulaha mashruucan.
Ku dhawaad labaatameeyo haween ah iyo afar rag ayaa ka qayb qaadanaya mashruucaan isdhexgalka ee loo bixiyey Iswedhen in a box. Marka la soo gaba-gabeeyo mashruucan ayaa hadafka yahay in la soo saaro boorso ama sanduuq ay ku jiraan farsamo ay tilmaameysa sida loo caawinkaro dadyowgaan waxbarashadooda yartahay amaba aan waxna qorin waxna aqrin, sanduuqaas oo loo diri doono dadka u qaabilsan demooyinka dalka waxbarida iyo gacan qabashada soo galootiga ku cusub dalka. Mariane Paine ayaa sharaxeysa waxa ku jiri doona sanduuqaan.
- Hadafkeena koobaad waxa weeye in aan marka hore soo saarka alaab aan balan qaaneyn markaan mashruucan maalgelintiisa ka dalbaneyney qasnada is-dhexgalka. Kaas oo ah in aan sameyn doono sanduuq ay ku jiri doonto boog ka hadlaya deganaanshaha, boogaas oo cod ahaan ugu duuban af-swedhish. Waxaan qori doonaa qoraal cusub oo tilmaamaya farsamooyin kala gedisan oo dadkaan wax loo bari karo, fursamadaas oo ku dhisan waxbarida dadyowga waaweyn oo ay ku dheeahan tahay muhiimad ay leedahay demokratiyada iyo waayo aragnimadooda ka qayb galayaasha. Sanduuqaas waxaan soo saari doonaa muda sannad gudahood ah, wadanka oo dhan waan ku baahin doonaa, ayey tiri.
Waxse jira hadaf kale oo mashruucaan laga leeyahay, kaasna oo ah sidii ka qayb galayaasha mashruucan u heli lahaayeen aas'aas ay ku fahmi karaan bulshada Iswedhen kuna dhisi karaan nolasha ay jeceyl-yahiin, iyaga oo la fahamsiinayo fursadaha ay halkaan ku heystaan iyo qaabka bulshada dalkaan u shaqeyso.
Macluumaadka aas'aasiga u ah mashruucaan ay ah boog Mariane Piane qortay oo ka hadlaya deganaanshada dalkaa oo la yiraahdo Medborger book kaas lagu turjumey shan luuqadood oo af-soomali ku jiro
Inta badan dadywoga mashruucan ka qayb-qaadanaya ayaa ku hadla luuqadaha Af-soomali, Dari oo ah luuqad looga hadlo Afghanistan iyo weliba carabi. 24 qof ee mashruucan ka qayb-qaadaneysa ayaa badankood yahiin Soomali iyo Afghanayiin. Muhamed Abubakar Sheikh waa macallin bare ka ah mashruucaan waxa uuna ku hadlaa lix luuqadood.